Healthy for your Body - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရကျဟာ လူကွီးလူငယျမရှေး၊ဆငျးရဲခမျြးသာမရှေး နှဈခွိုကျစှာသောကျသုံးကွတဲ့အရာပါ။အရကျအမြိုးမြိုးရှိသလို၊ အရသာအမြိုးမြိုး၊ဈေးလဲအမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ မညျသို့ပငျ ကှဲပွားနပေါစေ လူ့ခန်ဓာကိုယျမှအရကျအပျေါတုနျ့ပွနျမှုကတော့ အတူတူပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနတေ့ော့ သငျအရကျတဈခှကျသောကျလိုကျတိုငျးမှာခန်ဓာကိုယျအပျေါဘယျလိုသကျရောကျသှားမလဲ၊ခန်ဓာကိုယျကရော အရကျကိုဘယျလိုမြိုးတုနျ့ပွနျသှားမလဲဆိုတာလေး ပွောပွခငျြပါတယျ။
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့သှေးကွောထဲမှာပြျောဝငျနတေဲ့အရကျပမာဏ(blood alcohol concentration – BAC )ရဲ့အကွောငျးအရငျပွောပါမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ BAC level ပျေါလိုကျပွီး ခန်ဓာကိုယျရဲ့တုနျ့ပွနျမှုဟာ ကှဲပွားသှားလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ BAC(blood alcohol concentration) – သှေးကွောထဲမှာပြျောဝငျနတေဲ့အရကျပမာဏ သောကျသုံးလိုကျတဲ့အရကျအနညျးအမြား၊လူတဈဦးတဈယောကျစီရဲ့မတူညီတဲ့ခန်ဓာကိုယျတုနျ့ပွနျမှုတှအေပျေါမူတညျပွီး BAC လဲအနညျးအမြားကှာသှားပါတယျ၊၊ သငျအရကျသောကျလိုကျတဲ့အခါ အစာအိမျ၊အူလမျးကွောငျးမှစုပျယူသှားပွီး ၎င်းငျးမှတဈဆငျ့သှေးကွောထဲသို့ရောကျရှိသှားကာ တဈကိုယျလုံးသို့ပွနျ့နှံ့သှားတာဖွဈပါတယျ။
သှေးကွောထဲသို့ ပြျောဝငျရောကျရှိနတေဲ့အရကျပမာဏအခြိုးအစားကို BAC လို့သတျမှတျပါတယျ။ နားလညျလှယျအောငျပွောရရငျ သှေး (၁၀၀စီစီ)ထဲမှာပြျောဝငျနတေဲ့ အရကျပမာဏ(ဂရမျ) ကိုဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ အရကျတဈခှကျသောကျလိုကျတိုငျး ကိုယျထဲကဘယျလိုတုနျ့ပွနျမလဲ? BAC ပျေါမူတညျပွီး အောကျပါအတိုငျး ကှဲပွားသှားပါတယျ။
၁။(0.01-0.05g/100ml)- လူဟာပုံမှနျပဲဖွဈနပွေီးတော့ ပွောငျးလဲမှုထူးထူးခွားခွားမရှိပါဘူး။
၂။(0.03-0.12g/100ml)- အနညျးငယျနလေို့ထိုငျလို့ကောငျးလာပါပွီ။ စကားတှသှေကျလာ၊စိတျတှရှေငျလာ၊ခငျတတျမငျတတျလာ၊ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုတှတေကျလာ၊စိတျညဈစရာတှမေလေ့ာနိုငျပါပွီ။
၃။(0.09-0.25g/100ml)- လူကအတျောမူးစပွုလာပါပွီ၊ ထိုငျးမှိုငျးလာပွီ၊သှကျသှကျလကျလကျမဖွဈတော့ဘူး၊စကားတှမှေားလာမယျ၊တုနျ့ပွနျမှုတှလေေးလာမယျ၊ဒယိမျးဒယိုငျဖွဈမယျ၊မကျြလုံးတှဝေဝေါးလာ၊စိတျတှထှေလော၊နာတာတှကေငျြတာတှမေသိတော့ပဲ အနျတာတှဘောတှဖွေဈလာပါပွီ၊၊
၄။(0.25-0.40g/100ml)- သတိတှလှေတျလာ၊သတိလဈတာတှဖွေဈလာ၊အနျတာကပိုဆိုးလာ(အခနျ့မသငျ့ရငျ အနျဖတျဆို့ပွီး သတေတျပါတယျ)၊ဆီးတှထှေကျကြ၊မှတျဉာဏျတှခြေို့ယှငျးလာ၊တဈခါတဈလအေသကျရှူရပျတာတှတေောငျဖွဈတတျပါတယျ။
အရက်ဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေး၊ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး နှစ်ခြိုက်စွာသောက်သုံးကြတဲ့အရာပါ။အရက်အမျိုးမျိုးရှိသလို၊ အရသာအမျိုးမျိုး၊ဈေးလဲအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မည်သို့ပင် ကွဲပြားနေပါစေ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအရက်အပေါ်တုန့်ပြန်မှုကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သင်အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်သွားမလဲ၊ခန္ဓာကိုယ်ကရော အရက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုန့်ပြန်သွားမလဲဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သွေးကြောထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရက်ပမာဏ(blood alcohol concentration – BAC )ရဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ BAC level ပေါ်လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုဟာ ကွဲပြားသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ BAC(blood alcohol concentration) – သွေးကြောထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရက်ပမာဏ သောက်သုံးလိုက်တဲ့အရက်အနည်းအများ၊လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီရဲ့မတူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီး BAC လဲအနည်းအများကွာသွားပါတယ်၊၊ သင်အရက်သောက်လိုက်တဲ့အခါ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းမှစုပ်ယူသွားပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်သွေးကြောထဲသို့ရောက်ရှိသွားကာ တစ်ကိုယ်လုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သွေးကြောထဲသို့ ပျော်ဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့အရက်ပမာဏအချိုးအစားကို BAC လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် သွေး (၁၀၀စီစီ)ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ အရက်ပမာဏ(ဂရမ်) ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်း ကိုယ်ထဲကဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ? BAC ပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ကွဲပြားသွားပါတယ်။
၁။(0.01-0.05g/100ml)- လူဟာပုံမှန်ပဲဖြစ်နေပြီးတော့ ပြောင်းလဲမှုထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။
၂။(0.03-0.12g/100ml)- အနည်းငယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာပါပြီ။ စကားတွေသွက်လာ၊စိတ်တွေရွှင်လာ၊ခင်တတ်မင်တတ်လာ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတက်လာ၊စိတ်ညစ်စရာတွေမေ့လာနိုင်ပါပြီ။
၃။(0.09-0.25g/100ml)- လူကအတော်မူးစပြုလာပါပြီ၊ ထိုင်းမှိုင်းလာပြီ၊သွက်သွက်လက်လက်မဖြစ်တော့ဘူး၊စကားတွေမှားလာမယ်၊တုန့်ပြန်မှုတွေလေးလာမယ်၊ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်မယ်၊မျက်လုံးတွေဝေဝါးလာ၊စိတ်တွေထွေလာ၊နာတာတွေကျင်တာတွေမသိတော့ပဲ အန်တာတွေဘာတွေဖြစ်လာပါပြီ၊၊
၄။(0.25-0.40g/100ml)- သတိတွေလွတ်လာ၊သတိလစ်တာတွေဖြစ်လာ၊အန်တာကပိုဆိုးလာ(အခန့်မသင့်ရင် အန်ဖတ်ဆို့ပြီး သေတတ်ပါတယ်)၊ဆီးတွေထွက်ကျ၊မှတ်ဉာဏ်တွေချို့ယွင်းလာ၊တစ်ခါတစ်လေအသက်ရှူရပ်တာတွေတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။